1. ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်ကိုမွှေး၊ အရသာ၊ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်နည်း။ ဒါကြောင့်အံ့သြစရာကောင်းတာကမင်းဟာအစာမစားနိုင်တော့ဘူး
2. French Toast (သို့) ကြက်ဥနှစ်ပြီးသောပေါင်မုန့်ဟုလူသိများသောအနောက် toast ဇိမ်ခံစားသောက်ကုန်ဖြစ်သည်။ သင်အရသာအချိုပွဲသို့ဖန်တီးနိုင်သည့် ဘယ်ပါတီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် ပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေစာအဖြစ် နို့၊ လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီတို့ဖြင့်စားသုံးရန်မနက်စာအဖြစ်ပါဝင်ပြီးမွန်းလွဲပိုင်းတွင် reception ည့်ခံရန်ညစာအဖြစ်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်ကိုပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများဖြင့်အလှဆင်ပါကထပ်ထည့်လိမ့်မည် အာဟာရတန်ဖိုး လုံးဝ ဒါ့အပြင်အစာစားတဲ့အခါမှာလန်းဆန်းစေပြီးစွမ်းအင်ရှိနေတယ်။ ပြင်သစ် Toast ပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်ချက်ပြုတ်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင် ပါဝင်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ထားရန် Plus အားမခက်ခဲ စျေးတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ကုန်တိုက် ဒါမှမဟုတ်အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များအဖြစ်ကောင်းစွာ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါကအရသာရှိသောပြင်သစ် Toast Berry အတွက်ကုန်ကြမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့။ အောက်ပါအတိုင်းကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
3. ထူသောပေါင်မုန့်2ချပ်
4. ကြက်ဥ 2
5. 1 ခွက်ဖလားကိုလတ်ဆတ်သောနို့
6. ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာအတွက်ဆားတစ် pinch ။
7. စတော်ဘယ်ရီ၊ စတော်ဘယ်ရီသို့မဟုတ်မည်သည့်အသီးမဆိုကဲ့သို့ Berry အသီး။
8. 1 ငှက်ပျော
9. ပျားရည်, သင့်အရသာအရသိရသည်
10. အနည်းငယ်သော unsalted ထောပတ်
11. ပါဝင်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပါ ထို့နောက်နို့ရည်နှင့်ကြက်ဥများကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပါ။ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးပေါင်းစပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကရောနှောသုံးနိုင်သည်။
12. ပေါင်မုန့်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရိုက်နှက်ထားသောကြက်ဥနှင့်နို့ထဲသို့နှစ်ပြီးလျှင်၊ အပူနည်းပြီးအပူနည်းပြီးထောပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ် ၁၀ ဂရမ်ထည့်ပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရွှေနှင့်မွှေးကြိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်လှည့်ပါ။ မုန့်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါကဘေးဖယ်။ အခြားတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
13. ထိုအခါဒယ်အိုးထဲသို့ထောပတ်အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ငှက်ပျောသီးကိုဖန်ခွက်များထဲသို့ခုတ်ပြီးထောပတ်ဖြင့်သုတ်ပါ ဤနည်းဖြင့်ငှက်ပျောသီးကို ပို၍ ပင်စားချင်စိတ်ဖြစ်စေနိုင်သည်
14. ထို့နောက်ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်ကိုပန်းကန်တစ်ခုပေါ်တွင်တင်ပါ။ သီးနှင့်အတူအလှဆင် လှပဖို့, ထို့နောက်ပန်းကန်ပတ်လည်ရှိငှက်ပျောကိုတင်နှင့်လိုချင်သောအတိုင်းပျားရည်ကိုငါသွန်းလောင်း။ ဒါကပြင်သစ်ပေါင်မုန့်လုံးပြီးပြီ။
15. နေကောင်းလား အလွယ်တကူအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ပြင်သစ်ပေါင်မုန့်ပုံလုပ်နည်းကိုကြည့်ပြီးအရမ်းအရသာရှိတယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ်။ guests ည့်သည်များကိုကြိုဆိုရန်မီနူးတစ်ခုလည်းရှိသည် အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်အတူဇိမ်ခံကား ဒီအားလပ်ရက်အတွက်မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများအတူတကွစားရန်အတွက်ပြင်သစ်စားသောက်ရန်လုပ်ကြပါစို့။ ထိုအခါလူတိုင်းအတွက်သင့်လျော်သောအလွန်ဖန်တီးမှု menu ကိုဖြစ်ပါတယ်